Navigator အဓိကအ Dream ဖက်ရှင် ကျန်းမာရေး Recipes အကြံပြုချက်များ လက္ခဏာများ << 1234>> ပရိုတိန်း Cream ကို နူးညံ့သိမ်မွေ့, အလင်းနှင့် airy ပရိုတိန်း Cream ကို အများအပြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ကလေးများချစ်ကြတယ်။ pastries, လိပ်, မုန့်နှင့်မုန့်ပရိုတိန်းနှင့်အခြားအချိုပွဲဆိုအားလပ်ရက်စားပွဲပေါ်မှာအလှဆင်နှင့်ပွဲကျင်းပပိုပြီးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပရိုတိန်း cream ကိုဘိတ်ရှိသမျှအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောစားဖိုမှူးတစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအမုန့်၏အခြေခံသကြားနှင့်အတူတစ်ဦးရေမြှုပ်ပြည်နယ်မှကြာပွတ်သောကြက်ဥကိုအဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုတိန်း Cream ကိုပြွန်, အလှပြင်ဆင်ရေးမုန့်နှင့် pies များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏လေကိုက်ညီမှုအပေါ်ယံပိုင်းမျက်နှာပြင်စုံလင်သည်။ သို့သော်မုန့်၏ပရိုတိန်းအလွှာကိုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ထိုမုန့်ထဲမှာပရိ​​ုတင်းဓာတ်များ၏ထိပ်တွင်ပြုလုပ်ထူပြီးပိုမွှေးအောင်, ထုတ်ကုန်များအမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့အိမ်မှာပရိ​​ုတိန်းမုန့်လုပ်ပုံကို , သငျသညျပွောမညျ။ Custard Cream ကိုပရိုတိန်း ဒါကစာရွက်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အိမ်ရှင်မများအကြားဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်လိုအပ်ပရိုတိန်း၏ custard cream ကိုပြင်ဆင်ထားရန်။2ကြက်ဥလူဖြူ, အမှုန့်သကြား2ဇွန်း, ရေ၏ 25 ml, citric အက်ဆစ် မကြားတစ်ပြီနောက်ဟင်းသို့သွန်းလောင်းသောရေကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အထူအထိနှောင့်နှေးမီးပေါ်မှာတင်ထားသင့်ပါတယ်။ ပရိုတိန်းသီးခြားပန်းကန်ထဲမှာမြှုပ်ပြည်နယ်အထိရောနှောတစ်ခုသို့မဟုတ် whisk နှင့်အတူရိုက်နှက်ဖို့လိုပါတယ်။ ရလဒ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အတွက် whisk ဆက်လက်ပူရည်၏ပါးလွှာသောစမ်းချောင်းသွန်းလောင်းသင့်ပါသည်။ ရရှိလာတဲ့ပရိုတင်းဓာတ် cream ကို citric အက်ဆစ်ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ မုန့် Eclair နဲ့ပြွန်ကိုချက်ချင်းချက်ပြုတ်ပြီးနောက်စေနိုင်ပါတယ်ပရိုတိန်း custard ကိုသုံးပါ။ ပရိုတိန်း၏စာရွက်ထဲမှာတစ်ခုအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍတစ်ခု custard သကြားရည်ပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့် Dowar နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်သွန်းလောင်းသည်မပါလျှင်, မုန့်အရည်များနှင့်မိုးသည်းထန်စွာလှည့်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုရည်ရှည်လွန်းကိုမီးမစောင့်ကြောင့်အများကြီးတွေထူကြကုန်အံ့, ထိုမုန့်ပုံစံကိုဖုအတွက်ပရိုတိန်းကြောင့်ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်။ ပရိုတိန်းဆီမုန့် မုန့်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်:2ကြက်ဥလူဖြူ, ထောပတ် 100 ဂရမ်သကြား 150 ဂရမ် liqueur2ဇွန်း မ။
ရေနံပျော့ပျောင်းပြည်နယ်မှအရည်ကျိုခြင်းနှင့်ဂရုတစိုက်အထူမုန့်များ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုမှီတိုငျအောငျ whisk ရမည်ဖြစ်သည်။ ပရိုတိန်းသကြားနှင့်ရောကိုလည်းသူတို့ airy ဖြစ်လာအထိတစ်ဦး whisk ရောနှောသို့မဟုတ် Venichka သုံးပြီးခံရဖို့။ ထို့နောက်ဒယ်အိုးပရိုတိန်းတစ်ရေနွေးငွေ့ရေချိုးခန်းပေါ်တွင်တင်နှင့် 2-3 မိနစ် whisking ဆက်လက်ထားရမည်။ ဒယ်အိုးရဲ့ contents အနည်းငယ်တို့ထိရန်နွေးဖို့အေးမြဖြစ်သင့်သည်။ ပရိုတိန်းနှင့်သကြားအဘို့ whisking နှင့်နှိုးဆော်, အသေးစားဝေမျှကိုဆီဖြည့်စွက်ရပါမည်။ ရလဒ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အတွက်အရက်များသွန်းလောင်းရန်လိုအပ်ပေသည်။ ပရိုတိန်းဆီမုန့်အအေးခံဖြစ်သင့်နှင့်အချိုပွဲအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒီစာရွက်စုံလင်သောပရိုတိန်းမုန့်ကိတ်မုန့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမုန့်ပရိုတိန်း Cream ကို မလိုအပ်ပါထောပတ်မုန့်ပရိုတိန်းပြင်ဆင်ထားရန်:4ကြက်ဥလူဖြူ, 1/2 ခွက်ဖလားကိုသကြား, လတ်ဆတ်တဲ့မုန့် 1 ခွက်။ ကြက်ဥကိုလူဖြူ ထွက်ပေါ်လာသောရေမြှုပ် cream ကိုသူတို့နှင့်အသေးစားဝေမျှအတွက်မုန့်ထည့်ပါ။ ရရှိလာတဲ့အရောအနှောအလွန်ကောင်းရောနှောနှင့်နှင်တံဖြစ်သင့်သည်။ မုန့် Eclair, ပြွန်နှင့်သဲကိတ်မုန့်တစ်ရွန်းလဲ့ပရိုတိန်းလုပ်နိုင်တဲ့ကိုသုံးပါ။ ပရိုတိန်း cream ကိုစှကျတဲ့ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောရည်ကုန်တယ်အသီးမုန့်တစ်အထူနှင့်သိပ်သည်းစေသည်တစ်မုန့်အရသာပေးပါ။ ပရိုတိန်း cream ကို gelatin နှင့်အတူရေးဆွဲပြီးပါက, သကြားလုံး "ငှက်ရဲ့နို့ရည်" ကဲ့သို့တစ်ဦး marshmallow သို့မဟုတ်အချိုပွဲ toppings ရရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ gelatin ရည်ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်းရေနှင့်သကြားထည့်သွင်းထားရမည်။ ကယ်လိုရီပရိုတိန်း cream ကိုအနိမ့်သည်။ သို့သော်မုန့်ပရိုတိန်းနှင့်အတူတပြင်လုံးကိုကိတ်မုန့်ကိတ်မုန့်သို့မဟုတ်တစ်အပိုင်းအစတစ်ခုမြင့်မားတဲ့ကယ်လိုရီပါဝင်မှုများကိုရှိသည်, ထို့ကြောင့်သူတို့ကို၏အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ရန်ရှိသောအခါသိထားသင့်ပါတယ်။ မသိ, ဘယ်လောက် , ပရိုတိန်းမုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင်တို့ကိုအရသာများနှင့်လတ်ဆတ်တဲ့အိမ်လုပ်သကြားလုံးနှင့်အတူမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကိုမွေ့လျော်နိုင်ပါ။ ဆံပင်သစ်ကြံပိုး တပြိုင်နက်ချမ်းအေးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဆံပင်က၎င်း၏တောက်ပလတ်ဆတ်တဲ့ဆုံးရှုံးသွားသော?
အဆိုပါစက်ကိုနောက်ပြီး အမျိုးသမီးများလက်သည်း၏သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်, ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အခြေအနေနှင့်အတူလုံး​​ဝကျေနပ်မှုဘယ်တော့မှမဖြစ်ကြ - မရှိ, ခြွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယခုလူကြိုက်များလက်သည်းအလှပြင်ဆိုင်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာရိုးရိုးမကြာခဏမလောက်မဖြစ်သည့်အချိန်, ကြာ။ hardware ပိုင်းနောက်ပြီးတစ်ကြိတ်စက်ကို - ပြီးတော့နောက်တဖန်အအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တစ်ဦးထုတ်ကုန်အသစ်ပူဇော်သက္ကာ, ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများထံသို့မရောက်ရ။ ဤအကွောငျးအရာကိုဤဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖို့လုံးဝကျိန်ဖြစ်ပါတယ်ရဲ့အနည်းငယ်ပိုဒီ "မှော်" device ကိုနှင့် ပတ်သက်.
Toy Terriers - ဇာတ်ကောင် ကိုယ်တိုင်ခြေလေးချောင်းမိတ်ဆွေဖွဲ့ရရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ပြီသင်တစ်ဦးအလွန်သေးငယ်တဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းရှိပါက, မစိတ်ပျက်လက်ပျက်လုပ်ပါ။ အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုကမိမိသခင်မှ Hardy နှင့်သစ္စာစောင့်သိခွေးပေါက်ပွားရုရှားကစားစရာ Terriers ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံးခွေးကိုအထူးအဖြီးလိမ်းပုံမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်တစ်ဦးတစ်လတစ်ကြိမ်ရေချိုးဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်နီးပါးဆိုအဖွဲ့အစည်း၏ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Toychiki - အကြင်အလုပ်မကြာခဏခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ခရီးသွားလာကပါဝင်ပတ်သက်အလုပ်ရှုပ်လူများအတွက်အလွန်ကြီးစွာသော။ ဤရွေ့ကားခွေးတွေ, အခြားမှမတူဘဲ, ဿုံမိမိတို့ဗိုလ်ဖို့အဆင်ပြေအောင်။ သင်ပင်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လမ်းလျှောက်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုရငျ, သူကြောင်များအတွက် lotochek လျစ်လျူမရှုခဲ့ပေ။ ထို Terriers ခွေးကို ၏ အဆိုပါသဘာဝ
ရုရှား Terriers ကွဲပြားခြားနားသော complaisance နှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေမှု၏သဘောသဘာဝ။ သူကမိသားစုအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တိရစ္ဆာန်ကမ္ဘာ၏အခြားတစ်မြို့သားတို့, သူအရွယ်အစားကောက်ဖို့လိုအပ်မှသာမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူကောင်းကောင်းတလျှောက်ရရှိသွားတဲ့။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သမရိုးကျစံ Terriers ၏အလေးချိန် 2.
အဖြူ Sneaker ဆေးကြောဖို့မည်သို့ ? မ Washers ကိုအလွန်ဆိုပိုင်ရှင်၏အသက်တာကိုလွယ်ကူချောမွေ့။ ဒါပေမယ့်သင်ကလျှော်ခြင်းလို့ရပါတယ်တစုံတယောက်မျှအရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုမှတပါး, အခက်အခဲများဖိနပ်နှင့်ပေါ်ထွန်း။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအစဉ်အမြဲလူရဲ့ကောင်စီ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအားဖြင့်ကျော်လွှားလွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သို့အဖြူ Sneaker ဆေးကြောဖို့: အကြံပေးချက်များနှင့်, tricks လူငယ်များ၏ဒါပေမယ့်လည်းသက်ကြီးရွယ်အိုမသာတွေဖြစ်တဲ့ Sneaker ကဲ့သို့ဖြူဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်လိုလားကြပါတယ်။ ဤသည်အရောင်ကိုဝတ်ဆင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ capricious ဖြစ်တယ်, မကြာခဏမေးခှနျးပျေါလာ: ။ အဖြူ Sneaker ဆေးကြောဖို့ဘယ်လောက်, ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့မူရင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့် form ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လက်ဆေးအတွက်အဝါရောင်လှည့်ကြပါဘူး သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်မထိခိုက်စေဘဲအကြိုက်ဆုံးအဖြူ Sneaker ရှင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မည်သို့ဖောင်ဒေးရှင်း? မသေံ Cream ကို - ခတျေသစျမိန်းမတို့အဘို့ကိုမှန်ကန်အသက်ကယ်။ စသည်တို့ကိုမျက်စိ, ရေတိမ်အရေးအကြောင်းတွေ, အသက်အရွယ်အစက်အပြောက်, ဝက်ခြံအောက်အညိုအမည်းများနှင့်အိတ်: ကအတူ, သင်အားလုံးနီးပါးအရေပြားအပြစ်အနာအဆာဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါ ဒါပေမယ့်လက်ရုံးကိုအခြေခံအုတ်မြစ်အောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ပထမဦးဆုံး၏မျက်နှာပေါ်မှာတင်ထားကိုအဘယ်သို့သိရဖို့ကအရေးကြီးတယ် - အရေပြားနှင့်အတူပြဿနာများ၏အဖြေသည်မဟုတ်, အစားတိုး။ လေးစေသော။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအမြင်အာရုံကြောင့်ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်: တရားမျှတရေဆံပင်ရွှေရောင်အမှောင်ဆုံးသေံအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုရင်ဆိုင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ စိတ်ပျက်ဖွယ်အနည်းဆုံးနှင့်တူကြည့်ရှုမည်။ ဒါကြောင့်အခြေခံအုတ်မြစ်၏ညာဘက်အရိပ်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကောင်းတစ်အခြေခံအုတ်မြစ်?
Styles, 2014 ်စားဆင်ယင်အမျိုးသမီးရဲ့ဗီရို၏အရေးအပါဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီနွေဦးပေါက်-နွေရာသီ 2014 ခုနှစ််စားဆင်ယင်၏ Style ကိုယင်း၏မတူကွဲပြားမှုအတွက် dazzling ကြသည်။ အမျိုးသမီးမဆိုကိုယ်စားလှယ်အလွယ်တကူကိန်းဂဏန်းအဘို့အသင့်တော် option ကိုဖွင့်ကောက်နှင့်အသွင်အပြင်အဘို့နိုင်ဘူး။ 2014 ခုနှစ်, သံမဏိကိစ္စတွင််စားဆင်ယင်များအတွက််စားဆင်ယင်မှု၏အများဆုံးလက်ရှိစတိုင်, ရှင်းလင်းသောပခုံးနှင့်အတူ Retro စတိုင်များရဲ့ style အတွက်စားဆင်ယင်အဘိဓါန် Basque နှင့်အတူအပြည့်အဝအင်္ကျီ, အချိုးမညီဖြတ်တောက်မှု, ဆင်မြန်းနှင့်အတူကိုဆငျ။ Styles ညဦးယံအချိန်တွင်ဆင်မြန်း, 2014 2014 ခုနှစ်တွင်ရှိုးမှာဒီဇိုင်နာများရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စတိုင်နဲ့မတူကွဲပြားသောအရောင် palette နှင့်အတူညဦးယံအချိန်တွင်ဆင်မြန်း၏ကြီးစွာသောစုဆောင်းခြင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဖက်ရှင်ဆင်မြန်း 2014 ခုနှစ်သစ်ကိုစတိုင်များဖက်ရှင်မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်။ ရာသီသစ်တစ်ဦးအတွက် V-လည်ပင်းနှင့်အတူတစ်လမ်းကြောင်းသစ်ညဦးယံအချိန်တွင်ဆင်မြန်းအချိုးမညီအသွင်သဏ္ဌာန်, ်စားဆင်ယင်မူလိမ့်မည်။ 2014 ခုနှစ်အတွက်အရေးပါသောအသေးစိတ်မိန်းမနှစ်ယောက်ခြေထောက်၏ဂု​​ဏ်အသရေအပေါ်အာရုံစိုက်ထားတဲ့ခွဲစိတ်, overvalued လိမ့်မည်။ ရာသီ၏ထိခိုက်ကိုမညီဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ဒီတခြမ်းအပေါ်ပခုံးသိုင်းကြိုးနှင့်အခြားတစ်ဦးအပေါ်အင်္ကျီလက်နှင့်အတူဖွင့်လှစ်ထားပါသည်တစ်အချိုးမညီလည်ပင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ညဦးယံ၌၏ဖက်ရှင်အတွက်နောက်ထပ်အဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ်ရင်သားကင်ဆာအောက်မှမြင့်မြင့်ခါးနှင့်အတူတစ်ဂရိစတိုင်ဆင်မြန်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်နာများ, rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်နှင့်ပုလဲတွေနဲ့အလှဆင်အလှဆင်ခါးပတ်ကို neckline ်စားဆင်ယင်အပေါ်တစ်ဦးဇာချယ်လှယ်သောထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဂန္စတိုင်စောင့်မတော်မူ၏။ အများဆုံးဖက်ရှင်စတိုင်ဆင်မြန်းညဦးယံအချိန်ဖက်ရှင် 2014 စီးဆင်းနေသောအောက်ခြေကနဲ့ပေါင်းပြီးတင်းကျပ်စွာ-သငျ့လျြောထိပ်တန်းဖြစ်စဉ်းစားသည်။ Style ကို "ငါး" 2014 ခုနှစ်, ညဦးယံ၌ဆင်မြန်း၏သစ်အားလုံးမှာ collection များကို၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်
မတ်မတ်ထိုကဲ့သို့သောဇာ, chiffon, organza အဖြစ်ပေါ့ပါးတဲ့ပစ္စည်းများထားကြပါတယ်, အထူးလူကြိုက်များမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာနီးပါးဆိုကိန်းဂဏန်းဣတ္နှင့်ကျက်သရေ add လိမ့်မည်။ သငျသညျကိုယျခန်ဓာကိုစဉ်းစားရပါမည်ညဦးယံအချိန်စားဆင်ယင်တဲ့စတိုင်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ သူကအားနည်းချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားနှင့်သင်တို့၏ကိန်းဂဏန်း၏အားသာချက်များဖို့အာရုံစိုက်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ Tweet Поделиться